Feysal Cali Waraabe “Farmaajo wuu nooga dhaartay dagaalka Tukaraq, waana ka rumeysanay” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Feysal Cali Waraabe “Farmaajo wuu nooga dhaartay dagaalka Tukaraq, waana ka rumeysanay”
Guddoomiyaha Xisbiga mucaaradka Somaliland ee UCID Feysal Cali Waraabe oo ku sugan magaalada Brussels ayaa faahfaahin ka bixiyey kulan uu la qaatay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Feysal ayaa sheegay in Madaxweyne Farmaajo ka wada hadleen qodobo ay ka mid ahaayeen sidii deeqaha caalamka loo qeybsan lahaa, joojinta dagaalka Somaliland iyo Puntland iyo dib u bilaabida wadahadalladii Soomaaliya iyo Somaliland.
“Somaliland shirka qeyb kama aheyn, madaama aan doorkeedii la siin, balse annaga wafdigeenii halka nimid waxaan is aragnay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aan ka wada hadalnay arrimo dhowr ah oo dhamaantood aan isku afgarannay’’ ayuu yiri Feysal Cali Waraabe.
Dhinaca dagaalka Tukaraq ee kala dhaxeeya Puntland ayuu sheegay in sidoo kale madaxweyne Farmaajo isla soo qaadeen
’’Annaga ayaa si gaar ah ugu eedeeynay oo ku niri arrintan haddii aadan gacan ku laheyn adigaa dhiiri-galiyay, runtii wuu ka dhaartay waanan rumeysannay, waxaana isku afgarannay in sidii arrintaa loo qaboojin lahaa uu doorkiisa ka qaato’’ ayuu yiri Feysal Cali Waraabe.
Guddoomiyaha Xisbiga UCID ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha Soomaaliya isla soo qaadeen sidii mar kale dib loogu bilaabi lahaa wadahadalladii labada dhinac, isaga oo sheegay n ay isku afgartay in si dhaqso ah wahadalladaasi loo bilaabo.
Somalia: EU tops up funding for UNICEF to help Somali children
Dowlada Oo Loogu Baaqay ineey jidadka Furto